Nigeria oo 10 nin ku xukuntay 12 sano | Star FM
Home Caalamka Nigeria oo 10 nin ku xukuntay 12 sano
Nigeria oo 10 nin ku xukuntay 12 sano
Maxkamada ku taalo Magalada Lagos ayaa rag 10 ah k uxukuntay xabsi 12 sano ah, ka dib afduub ay u geyteen muwadiniin Shiines ah sanadkii tagay.
Saraakiisha ayaa u arka xukunkaasi inuu ka jawaabayo burcada xeebaha dalka Nigeria.
Garsooraha maxkaamda sare Ayokunle Faji, ayaa ku ganaaxay ragga min 250,000 oo lacagta dalka Nigeria ah. Waxaa uuna sheegay in afduubka loo geystay saraakiisha markabka ee 18 ahaayeen ay ahayd mid ceeb ku ah dalka isla markana dhaqaalaha saamayn ku yeelatay.
Kooxda diifaca raggan ayaa sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan go’aanka maxkamada.
Dalalka galbeedka Africa ayaa sanadkii tagay laga soo tabiyay dhacdooyin badan oo la xiriira afduubka laga geystay badda, waxa la afduubay 130 qof.
Previous articleRooble oo xilka ka qaaday taliye ku xigeenka NISA